"I-Sawnee Mountain Hikers Hideaway" - I-Airbnb
"I-Sawnee Mountain Hikers Hideaway"
UWilliam ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-95% yeendwendwe zakutshanje.
Le ndawo igcwele yimbali ukusuka kwiTrail of Tears, ukuya kwiNtaba iSawnee. Le ndlu ikwimizuzu eyi-8 ukusuka eLake Sydney Lanier. Kukho iivenkile zokutyela ezimbalwa zasekuhlaleni kunye nokuzonwabisa ukuze uhlale uxakekile. Ukuba uyathanda ukunyuka intaba siyayikhuthaza. Ungashiya apha malunga ne-500 feet ukunyuka induli, uhamba ngeenyawo ukuya kumzila. Okanye ukuba ungathanda, kukho iipaki ezimbalwa zendledlana ezikwiimayile eziyi-2 ukuya kweziyi-3 ezinendawo yokupaka esimahla.
Isecaleni kakhulu kwaye iyimfihlo! Isandi esihle sengxangxasi eyenziwe ngabantu sinokuviwa ngaphandle nje kwefestile yegumbi lokulala. Ukubuka iintaba ngamaxesha athile onyaka kunye nomhlaba kuhle kakhulu.
Eli khaya libekwe ezantsi kweSawnee Mountain Conservancy. Ngaphezu kweehektare eziyi-900 zeendlela ezintle zokunyuka intaba ezinokufikeleleka ngaphandle nje komnyango ongasemva kwaye ziphantse zibe yi-500 feet ukunyuka induli.
Siyavuya, kwaye sikhetha ukudibana nokubulisa undwendwe lwethu. Kodwa ke siyazingenela kwabo bakhetha ukuzingenela. Sifumaneka ngefowuni imini nobusuku ukuze sikuncede nangayiphi na indlela. Kubaluleke kakhulu ukuba iindwendwe zethu zikhululeke kangangoko kunokwenzeka.
Siyavuya, kwaye sikhetha ukudibana nokubulisa undwendwe lwethu. Kodwa ke siyazingenela kwabo bakhetha ukuzingenela. Sifumaneka ngefowuni imini nobusuku ukuze sikuncede nangayiphi n…